13 Reasons Why ရဲ့ Season2Teaser Video ထွက်ပေါ်လာပါပြီ
1 May 2018 . 2:56 PM
Streaming Giant ကြီးဖြစ်တဲ့ Netflix ဟာ လူငယ်ဆယ်ကျော်သက်ဇာတ်လမ်းထဲမှာ အရမ်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ 13 Reasons Why ရဲ့ Season2လွှင့်မယ့် နေ့ကို မေလ ၁၈ ရက်နေ့လို့ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။
ပထမ Season တုန်းကလည်း 13 Reasons Why ဟာ အငြင်းပွားဖွယ်များနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒုတိယ Season ကိုလည်း ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲလို့ စောင့်မျှော်ကြည့်ရမှာပါပဲ။ ပထမ Season တုန်းက Katherine Langford ချန်ထားခဲ့တဲ့ ကက်ဆက်တိပ် ၁၃ ခွေ၊ တစ်ခွေစီမှာ သူဘာကြောင့် ဒီလို ဘဝကို အဆုံးသတ်ရတယ်ဆိုတာကို သဲလွန်စတွေ ၊အတွေးအမြင်တွေနဲ့ ထားခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယ Season ကိုတော့ Teaser အရ Polaroids ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ တင်ဆက်မယ်လို့ မျှော်မှန်းရပြီး ပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေအားလုံးဟာ Hannah ရဲ့ မိဘတွေနဲ့ ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးကြားမှာ သူတို့ရဲ့ ပါးစပ်တွေကို ပိတ်ထားဖို့ သတိပေးခံနေကြရပါတယ်။
ဇာတ်ကောင်သစ်တွေလည်း ပါဝင်လာပြီး Chloe ဆိုတဲ့ Liberty High က Cheerleader (Anna Winters က သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်)ပါဝင်လာသလို Hannah ရဲ့ အမေ Olivia Baker ကလည်း သူ့သမီးရဲ့ အမှုအတွက် ကွင်းဆက်တွေကို တစ်စချင်းဆက်စပ်နေပုံကို ပြသထားပါတယ်။
အဆုံးပြကွက်မှာတော့ Clay Jensen (Minnette) ကတော့ Hannah ရဲ့ Polaroids ဓာတ်ပုံကို ကောက်ယူကြည့်တဲ့အခါ နောက်ကျောဘက်မှာ “ The tapes were just the beginning.” လို့ ရေးထားတဲ့အတွက် ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ရင်ခုန်စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
ဒုတိယ Season မှာတော့ ပထမ Season ကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ Jay Asher ရဲ့ အရောင်းရဆုံးစာအုပ်ထဲက အကြောင်းအရာတွေထက် ပိုလွန်သွားမယ်လို့ မျှော်မှန်းရပြီး Hannah ဟာလည်း တစ်ကားလုံးရဲ့ အသက် ပြောပြသူ ဇာတ်ကောင်မဟုတ်လောက်တော့ပါဘူး။
ကဲ! 13 Reasons Why ရဲ့ Season2ကို မေလ ၁၈ ရက်မှာ ရင်ခုန်စွာ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကြစို့ဗျာ။
Ref : hollywoodreporter.com
13 Reasons Why ရဲ့ Season2Teaser Video ထှကျပျေါလာပါပွီ
Streaming Giant ကွီးဖွဈတဲ့ Netflix ဟာ လူငယျဆယျကြျောသကျဇာတျလမျးထဲမှာ အရမျးအောငျမွငျခဲ့တဲ့ 13 Reasons Why ရဲ့ Season2လှငျ့မယျ့ နကေို့ မလေ ၁၈ ရကျနလေို့ သတျမှတျထားပါတယျ။
ပထမ Season တုနျးကလညျး 13 Reasons Why ဟာ အငွငျးပှားဖှယျမြားနဲ့ အောငျမွငျခဲ့တဲ့အတှကျ ဒုတိယ Season ကိုလညျး ဘာတှေ ဆကျဖွဈလာမလဲလို့ စောငျ့မြှျောကွညျ့ရမှာပါပဲ။ ပထမ Season တုနျးက Katherine Langford ခနျြထားခဲ့တဲ့ ကကျဆကျတိပျ ၁၃ ခှေ၊ တဈခှစေီမှာ သူဘာကွောငျ့ ဒီလို ဘဝကို အဆုံးသတျရတယျဆိုတာကို သဲလှနျစတှေ ၊အတှေးအမွငျတှနေဲ့ ထားခဲ့ပါတယျ။
ဒုတိယ Season ကိုတော့ Teaser အရ Polaroids ဓာတျပုံတှနေဲ့ တငျဆကျမယျလို့ မြှျောမှနျးရပွီး ပါဝငျတဲ့ ဇာတျကောငျတှအေားလုံးဟာ Hannah ရဲ့ မိဘတှနေဲ့ ကြောငျးအုပျခြုပျရေးကွားမှာ သူတို့ရဲ့ ပါးစပျတှကေို ပိတျထားဖို့ သတိပေးခံနကွေရပါတယျ။
ဇာတျကောငျသဈတှလေညျး ပါဝငျလာပွီး Chloe ဆိုတဲ့ Liberty High က Cheerleader (Anna Winters က သရုပျဆောငျထားပါတယျ)ပါဝငျလာသလို Hannah ရဲ့ အမေ Olivia Baker ကလညျး သူ့သမီးရဲ့ အမှုအတှကျ ကှငျးဆကျတှကေို တဈစခငျြးဆကျစပျနပေုံကို ပွသထားပါတယျ။
အဆုံးပွကှကျမှာတော့ Clay Jensen (Minnette) ကတော့ Hannah ရဲ့ Polaroids ဓာတျပုံကို ကောကျယူကွညျ့တဲ့အခါ နောကျကြောဘကျမှာ “ The tapes were just the beginning.” လို့ ရေးထားတဲ့အတှကျ ဘာတှေ ဆကျဖွဈလာမလဲဆိုတာ ရငျခုနျစောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။
ဒုတိယ Season မှာတော့ ပထမ Season ကို အခွခေံရိုကျကူးထားတဲ့ Jay Asher ရဲ့ အရောငျးရဆုံးစာအုပျထဲက အကွောငျးအရာတှထေကျ ပိုလှနျသှားမယျလို့ မြှျောမှနျးရပွီး Hannah ဟာလညျး တဈကားလုံးရဲ့ အသကျ ပွောပွသူ ဇာတျကောငျမဟုတျလောကျတော့ပါဘူး။
ကဲ! 13 Reasons Why ရဲ့ Season2ကို မလေ ၁၈ ရကျမှာ ရငျခုနျစှာ ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ကွစို့ဗြာ။